Showing posts with the label एकाङ्की
– समीर पाख्रिन समय ः दिउँसो । दृश्य ः महेन्द्र राजमार्गसित जोडिएको एउटा सानो बजार । बजारको एउटा गल्लीको पक्की सटर कोठामाथि डा. पाण्डेको क्लिनिक लेखिएको पुरानो साइनबोर्ड देखिन्छ । क्लिनिक खुल्ला छ । क्लिनिकमा एकजना पातलो जीउडालको मानिस अखबार पढिरहेको छ । ऊ पटकपटक बाटोतिर नजर डुलाउने गर्दैछ । यत्ति नै बेला एकजना गाउँले महिला यस्तै १३/१४ वर्षकी छोरीसहित क्लिनिकअगाडि आएर चारैतिर हेर्छिन् । डा. पाण्डे ः कसलाई खोज्नुभएको ? महिला ः डा. पाण्डेको क्लिनिक, यतै कतै गल्लीमा छ भनेको सुनेको थिएँ । कता होला ? डा. पाण्डे ः (चश्मा खोलेर शिशा पुछ्दै) बहिनी, मेरै नाम त हो नि वरिष्ठ डा. पाण्डे । आउनोस्, यही हो, डा. पाण्डेको क्लिनिक । (महिला सङ्कोच मान्दै प्रवेश गर्छिन् ) बसौं । महिलाले फेरि एकचोटि चारैतिर सरसर्ती नजर डुलाउँछे । के हेर्नुभएको ? पत्यार लागेन कि क्या हो ? म नै हुँ वरिष्ठ डाक्टर पाण्डे । (चश्माको शिशाबाट महिलाकी छोरीतिर एकोहोरो हेर्छ ।) महिला ः मेरी छोरी आधारातदेखि पेट दुख्यो भनेर रोएकी रोएकै छ । यसैले जचाउन ल्याएकी । डा. पाण्डे ः ठीक छ, डाक्टर पाण्डेको क्लिनिकमा आएपछि पीर मान्नुपर्दैन । पहि
– समीर पाख्रिन दृश्य ः शिक्षक मनोहरको घर । मनोहर सर विचलित अवस्थामा कोठामा ओहोरदोहोर गरिरहेकै बेला पत्नी सुकन्याको कतै बाहिरबाट तनावपूर्ण भावभङ्गिमा प्रवेश । सुकन्या ः आखिर मैले सम्झाउँदा सम्झाउँदै पनि हजुरले जागिरबाट राजीनामा दिएरै छाडनु भयो होइन ? मनोहर ः ( झर्काे मान्दै ) तँलाई कसले भन्यो ? सुकन्या ः कसले भन्यो रे ? स्कूल, चोक सबैतिर हजुरकै विषयमा चर्चा भइरहेको छ । मनोहर ः के भयो त १ मलाई चुनाव लडनु छ, त्यसैले राजीनामा दिएँ । बीस वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुँदैछ । पूmलबारी गाउँपालिकामा पनि सडक, अस्पताल, क्याम्पस, प्रहरी कार्यालयको आवश्यकता छ । सिंचाइ कार्यक्रम ल्याउनु छ । खानेपानीको टंकी निर्माणजस्ता थुप्रै काम गर्नुछ । त्यसैले मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा वडा अध्यक्षको पदका लागि चुनाव लडने मनस्थिति बनाएँ । अब इमानदार जनप्रतिनिधि, जनताको सेवक भएर गाउँको विकासमा समर्पित हुनेछु । सुकन्या ः खाइपाई आएकोे जागिर छाडेर चुनाव लडनु के बुद्धिमानी होला त ? जितियो भने त ल ठीकै छ हारियो भने नि ? मनोहर ः तँलाई के थाहा ? यो गाउँमा मनोहर सरको प्रतिद्वन्द्वी बनेर उम्मेदवारी दिने कसैको हिम्मत छ
– समीर पाख्रिन दृश्य ः गाउँको घरआँगन । आँगनमा गाउँका साथीहरू भेला गरेर सुरेश तास खेलिरहेका छन् । यत्तिकैमा पन्ध्र दिनकी सुत्केरी चमेली पँधेरोबाट पानी बोकेर आँगनमा आउँदा आउँदै उनलाई एकाएक चक्कर लाग्छ र उनी भुइँमा थ्याच्च बस्छिन् । गाग्रोको पानी आँगनमा छताछुल्ल भई पोखिंदा तास खेलेर बस्ने सबैको ध्यानाकर्षण हुन्छ । चमेली दुवै हातले टाउको बेस्सरी समातेर भुइँमा बस्छे । यत्तिकैमा सुरेशलगायत उसका साथीहरू आत्तिएको भावभङ्गीमा चमेलीनजिक पुग्छन् । सुरेश ः (भुइँमा लडेकी चमेलीलाई झक्झकाउँदै) चमेली १ एई चमेली १ तँलाई के भयो ? ल यो त एकै क्षणमा लालकलुलुक पो भई त । हैन, यसलाई एकाएक के भयो ? चमेली १ एई चमेली १ मदन, जगिया हेर्न यसले त आँखा पनि खोलिरहेकी छैन । अब के गर्ने होला ? हे भगवान् १ यो के आपत् आइलाग्यो ? (सुरेश चमेलीको हत्केला दल्दै) एई सुन्दर जा त, रामजी बाजेलाई बोलाएर ले । पक्कै पनि यसलाई बाँसघारीको भूत लागेको जस्तो छ । मदन ः होला होला । अस्ति सुखियाकी आमा पनि यसरी नै ढलेकी थिइन् अरे । रामजी बाजेले एउटा कालो भाले चढाएपछि निको भई अरे भन्दै थियो । मदन ः तँ के कुरा सुनेर बसिरहेको
बल्ल चेत खुलेछ
- समीर पाख्रिन दृश्य : दुई घरबीचको खुला आँगन । आँगनमा बालकद्वय प्रकाश र दीपक बालुवाको थुप्रोमाथि बसेर घर बनाउँदै, खेल्दैछन् । यत्तिकैमा दुईजनाबीच घरको विषयलाई लिएर वादविवाद हुन्छ ।) दीपक : हेर त प्रकाश तेरोभन्दा मेरो घर ठूलो । प्रकाश : तेरो घरमा त ढोका पनि छैन । त्यस्तो पनि घर हुन्छ ? दीपक : तेरो घरमा पनि त झ्याल छैन । (दुवै फेरि निहुरिएर आआफ्नो घर बनाउन थाल्छन् ।) प्रकाश : दीपक मलाई त बुबाले यसपालि दशैंमा बन्दुक किनिदिने भन्नु भा’छ । दीपक : जाबो बन्दुक के गर्नु ? म त रिमोटले चल्ने गाडी किनी माग्छु । प्रकाश : दीपक मलाई पनि खेल्न दे ल, तेरो गाडी ? दीपक : अहँ , दिन्नँ । पहिले पनि तैंले मेरो प्लेन बिगारी दिएको होइन ? म त यो पालि कसैलाई खेल्न दिन्नँ । प्रकाश : त्यसो भए जा यहाँ खेल्नुपर्दैन । (प्रकाशले दीपकलाई धकेलिदिन्छ । दीपक बालुवाको थुप्रोमाथि लड्छ । यसरी लड्दा दीपकको घर भताभु· हुन्छ ।) दीपक : (आफूले बनाएको घर भत्केको देखेपछि रिसले जुरुक्क उठ्छ र प्रकाशको घरलाई लातले हान्दै) ला, तेरो घर पनि भत्काइदिएँ । प्रकाश : ए, तँ मेरो घर भत्काउने ? (दुईजनाबीच झगडा हुन्छ । दीपक रुन्छ । यो सुनेर दीपक